In dunida maanta ee technology si degdeg ah horumarinta, waxaa marna ka badan fursadaha loogu talagalay dadka si ay u daawadaan videos on telefishinkooda. Long tageen wakhtigii dhisayaa cajalad VHS aad galay ciyaaryahan VHS iyo helitaanka ma guurto ah-faraha la soo bandhigay ay yihiin. Maanta, aad leedahay fursado badan oo kala duwan si aad u daawato video on your telefishinka iyo haddii qaar ka mid ah fursadaha ay ku guuldareysato, in aad wali leeyihiin doorashooyin kale oo ku saabsan dib u dhaco. Waxaan ku qoran 5 ka mid ah habab badan oo caadi ah si aad u daawato aad video on your television.
Mid ka mid ah habab badan oo caadi ah si aad u daawato filimada on your TV waa DVD ciyaaryahan aad. Ciyaartoyda DVD raacay ciyaaryahan VHS sida qalabka asaasiga ah si uu u daawado filimada on TV. Ciyaartoyda DVD dhexdhexaad ah oo la awoodi karo si uu u daawado filimada tayo sare iyo qiimaha ay kala duwanaan karaan yara xad ah ku xiran tahay wixii kasoo muuqday aad rabto in aad ku DVD ciyaaryahan aad. Sida ciyaartoyda DVD noqday badan oo horumarsan oo leh sawir tayo sare bandhigay, mid si dhab ah u daawan kartaa oo wuxuu ku raaxaysan ay video-daawashada waayo-aragnimo la ciyaaryahan DVD ay.
2. USB ama External Hard Drive Devices
Haddii TV ayaa dekedda USB ah, waxaa jira fursad wanaagsan waxaa laga yaabaa inaad si uu u daawado filimada adiga oo isticmaalaya ah flash drive USB awoodaan. USB flash drives ku jira hindisooyin in ay leeyihiin qadar uguna ah meel lagu kaydiyo waa in qaban karaa waxyaabaha aad. Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan file aad qaban karto ee aad USB flash drive, waa files video.
Si aad u ciyaaro aad filim, waa in aad loo xaqiijiyo wixii qaab faylka gaarka ah (s) aad TV ciyaari doono. Haddii aanay qaab aad TV aqoonsan tahay, iyo TV walba waa ka duwan yahay, ka dibna faylka ma ciyaari doono. Laakiin haddii aad TV aqoonsan nooca faylka, si fudud, shuban aad video rogtid oo aad USB flash drive iyo geli dekedda USB ee TV-ga. Helaan menu iyo aad file waa in la akhrin karo oo diyaar u ah inuu ciyaaro.
3. Isku Your Computer si ay TV Isticmaalka HDMI Cable
Taa darteed marar badan, waxa aad helaysaa video files kombiyuutarka aad in kaliya ma dareemaan xaq u daawanayay on your computer monitor yar. Waxaa laga yaabaa in show cusub bixi ama filim ama waxaa laga yaabaa daqiiqado qoyska aad u suurtagashay in ay ku duubaan. Wax kasta oo video yahay, waxaad ku daawan kartaa television iyadoo la isticmaalayo cable HDMI ah. Sare-Qeexid Warbaahinta interface (HDMI) waa aalad audio / video ah oo loo isticmaalo in lagu video iyo xogta audio wareejiyo ka mid il HDMI-waafaqsaneyn in kale. Haddii aad leedahay dekedda HDMI ah in aad TV oo computer la socdaan cable HDMI ah, in ay ku xirmaan fiilada ka your computer si aad u daawato aad TV iyo video on your TV. Haddii si sax ah ku xiran, waxa dhaca halkan ka dibna waa in aad computer dhaqmo sida qalabka loo maqli ah (qabaa, DVD Player) halka falal television aad ah Kormeere / shaashadda.
4. Watch Netflix on Your ay ciyaareyso ay tacsiyeeyaan
Netflix waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan adeegyada ku-baahida geeyo internet-ka. Netflix ayaa ururinta oo ballaaran ay muujinayso telefishanka iyo filimada diyaar u ah inay la daawaday ee aad qubo. Haddii aad leedahay mid ka mid ah gaymamka weyn - Playstation, Madaxweyne Siilaanyo, ama Wii - adeegyada Netflix waa la jaan qaada qalabka kuwa oo waa in aad awoodaan inay ku raaxaystaan ​​daawashada barnaamijyada Netflix aad jeclaato noqon. Si aad u daawato Netflix on nidaamyadan, dhajisan ku saabsan habka ciyaaraha kala duwan, iyo Netflix waa in ay ahaataa mid ka mid ah la dhisay-in warbaahinta daawashada fursadaha qaybta Video ah. Sidaas darted, haddii aad ku talo jirto inaad iibsato 2 video cusub ayaa la yaabka leh Spider-Man ciyaarta, aragti ahaan, waxaad ka daawan karaan filimka la yaabka leh Spider-Man dibna ciyaaro kulanka video saxda ah ka dib (ama bilcaksii)!
Daawashada content huleeshay ayaa soo gaaray uumi la taaban karo tan iyo markii Netflix galay suuqa dhowr sano ka dib. Mid ka mid ah waxyaabaha ku cusub oo aad sii qulquli karaan content audio iyo video aad television waa Google ee Chromecast. In qaabka ugu fudud, Chromecast waa qalab USB-sida in daboolaya aad television iyo durdurro leh content audio iyo video dhex shaqeeya xiriir Wi-Fi ah a. On u gaar ah, Chromecast oo keliya kuu ogolaanaya in aad sii qulquli ka tiro kooban oo goobood - YouTube, Netflix, iyo Songza la magacaabo wax yar.
Maaddaama ay xaqiiqda ah in fursadaha geeyo waa arrin ku kooban la Chromecast, halkaas weeye meesha DreamStream soo gala play. DreamStream waa codsi cusub oo loo isticmaalo in lala Chromecast si ay u sii qulquli video iyo content audio ka your computer si aad telefishan, dusheeda oo ka mid ah fursadaha hadda aad leedahay la Chromecast ah. Sidaas darteed haddii aad doonayso si aad u daawato video in aad ina garaacid uu orod gurigaaga koowaad ama sheegid naaxariista hore gabadhaada, DreamStream kuu ogolaanayaa inaad si ay u sii qulquli ka your computer si aad television.
> Resource > Video > Top 5 Siyaabaha Daawo Movies on your TV